HomeWararka CiyaarahaRasmi: Kooxda kubadda cagta Real Madrid oo Heshiis la gaaray Kylian Mbappe
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa heshiis la gaadhay xiddiga reer France ee Kylian Mbappe oo bisha dambe kasoo degi doona Santiago Bernabeu, kaddib shan sannadood oo uu u ciyaaray Paris Saint-Germain iyo sannado ka horreeyey oo ay da’diisu aad u yarayd oo uu usoo dheelay AS Monaco oo ahayd kooxdii uu kasoo baxay.
Kylian Mbappe ayaa si xor ah ugu wareegi doona Real Madrid oo heshiis buuxa la gaadhay horraantii toddobaadkan, xilli uu Mbappe isku diyaarinayay ciyaarta ugu dambaysa ee lagu soo gunaanadayo horyaalka Ligue 1 ee usbuuca soo socda la dheeli doono.
Sida uu xaqiijiyey wargeyska MARCA, Real Madrid ayaa heshiis shan sannadood ah la gaadhay Kylian Mbappe oo ah ciyaartoyga labaad ee ugu qaalisan kubadda cagta, isla markaana sannadkii 2017 ay PSG ku iibsatay 180 milyan oo Euro.
Labada dhinac ayaa wax walba ka wada hadlay bilihii ugu dambeeyey waxaanay gaadheen heshiis buuxa oo aan dibedda usoo bixin, taas oo keentay in Mbappe uu ka gaws-adaygo dalabaad lacago badan xambaarsan oo ay u bandhigtay Paris Saint-Germain.
Florentino Perez oo adeegsanaya xeeladihii looga bartay ee uu xiddigaha waaweyn kusoo jillaaban jiray, ayaa waxa uu xagaagii hore ku dalbaday Mbappe lacag gaadhaysay illaa 200 milyan oo Euro oo ay PSG diidday, waxaana uu laacibkan da’da yar u muujiyey inay ka go’an tahay in uu wax walba u huro.
Madaxweynaha Real Madrid ayaan marnaba xidhiidh toos ah la samaynin Kylian Mbappe maadaama uu iska ilaalinayay in ay PSG arrintaas ku dacweyso, waxaase uu hawsha ka waday daaha dabadiisa, iyadoo bilowga heshiiska iyo wada-hadallada uu laacibkani ku imanayo Santiago Bernabeu ay bilaabmeen January 1.
Labada arrimood ee furaha u noqday heshiiska Real Madrid iyo Mbappe
Mbappe ayaa booqday magaalada Madrid toddobaadkii hore, waxaana uu joogay maalmihii Isniintii iyo Salaasadii, waxaana la rumaysan yahay in waqtigaas ay labada dhinac fursad fiican isku heleen oo heshiiska la dhamaystiray.
Jose Angel Sanchez oo ah agaasimaha guud ee Real Madrid ayaa hagayay wada-xaajoodyada, waxaanay kooxdiisu mudnaanta siisay wax kasta oo suurtogelinaya in heshiiska la dhamyastiro